INutridieta: iwebhusayithi yakho yokutya ukunciphisa umzimba | Ukutya kweNutri | Ukutya kukaNutri
INutridieta: iwebhusayithi yakho yokutya ukuze unciphise umzimba
INutridieta yi iwebhusayithi ekhethekileyo ekutyeni ukukunceda ukunciphisa umzimba. Sikuxelela konke malunga nezona zinto zibalulekileyo zokutya, kunye neepropathi kunye nezibonelelo zempilo yakho. Ukuba ufuna ukwazi ezona ndlela zokutya zisebenzayo ukunciphisa umzimba, ungawaphosi amanqaku ethu.
Ezona ndlela zokutya zisebenzayo
Ukuba siqala ukukhangela, kukho izidlo ezingapheliyo esinazo. Kodwa kwaNutridieta sikuphathela eyona intle izidlo ukunciphisa umzimba kwaye ugcine ubunzima bakho. Iingcamango ezilula kakhulu zokuziqhelanisa, ngaphandle kokulamba kunye neengcebiso ezilungileyo ukuze uhlale ugcina ubunzima bakho.
Kungenxa yoko le nto kwiwebhusayithi yethu uza kufumana ifayile ye- izidlo ezidumileyo kodwa kwangaxeshanye, eyona isebenzayo kwaye ikhuselekile. Zizo kuphela ezisiqinisekisa ngeziphumo ezilungileyo kwaye ezingabeki impilo yethu emngciphekweni. Uya kufumanisa ukuba ngenkuthazo encinci, uya kuyifumana loo ndlela yokulahla iikhilos zakho ezongezelelweyo, ke apha uya kuhlala usezandleni ezilungileyo. Kuba uya kufumana imenyu efanelekileyo kwisingqisho sakho semihla ngemihla kunye nokutya okunempilo, okunotyebileyo nolula kakhulu ukulungiselela.
Ngaba uyafuna ukufumana ezinye izidlo?
Qiniseka ukuba undwendwela icandelo lethu lokutya apho uya kufumana elungele iimfuno zakho.
Ezona ndlela zokutya zilungileyo
Ngamanye amaxesha siyathandabuza xa sixelelwa Izixhobo zokutya ukunciphisa umzimba. Kodwa ukusukela ngoku, sizokutshintsha umbono wethu malunga nabo. Kungenxa yokuba kwaNutridieta sikubonisa indlela onokutya okusisiseko kunye nezinye izongezo onokuzifumana ngayo iziphumo ekudala uzifuna.
Ngamanye amaxesha sinezinto zokutya ezandleni zethu kodwa asazi ukuba sizisebenzisa njani. Iimveliso zendalo onokuzisebenzisa ngokuzithemba ngokupheleleyo ukuze uzive kwaye ujongeke ubhetele. Kwiwebhusayithi yethu ungabona yonke imizekelo kunye neenkcazo ezicacileyo esikubonisa zona ngazo. Uya kususa uloyiko lwezongezo!
Ngaba uyafuna ukufumana ezinye izongezo zesondlo?
Kwicandelo lethu lesondlo uya kufumana ukutya okuninzi okuneempawu ezintle eziza kukunceda ukunciphisa umzimba okanye ukuphucula impilo yakho. Ngaba ubazi bonke?
Bona ezinye izongezo zesondlo
Jonga iwebhusayithi yethu
Phatha a indlela yokuphila esempilweni kunokwenzeka ukuba nje sineengcebiso ezilungileyo okanye isikhokelo sokwenza oko kwenzeke. Ngesi sizathu, eNutridieta uyakufumana uthotho lwamacandelo apheleleyo, oza kuwenza ngelixa ukhathalela impilo yakho kunye nokulawula ubunzima bakho. Kwelinye icala, ungonwabela ukutya okukhuselekileyo kunye nolungelelwaniso oluhambelana nendlela ophila ngayo.
Ewe kunjalo, kwiwebhusayithi yethu uya kufumana zonke iifayile ze- ulwazi oluyimfuneko malunga nokutya ngamanye amaxesha etafileni yethu, kodwa asazi kakuhle. Izibonelelo zalo, izibonelelo kunye neepropathi ziya kugubungela uninzi lolu lwazi. Ngabo, sikunceda ekulungiseleleni iiresiphi ezimnandi, kuba ukutya ukutya okusempilweni akufuneki kube kukudika.
Sikwathetha iingcebiso zempilo kunye nezifo ezithile, ukuze ube nalo lonke ulwazi oluhlaziyiweyo kwaye uqhagamshelane namathandabuzo athi ngamanye amaxesha avele ezingqondweni zethu. Ewe asizilibali ezona mithambo zisempilweni, kunye nezona midlalo zicetyiswayo kunye neemveliso okanye izongezo eziza kubonelela ngomzimba wakho ngento oyifunayo, uhlala unesiseko sendalo.
Apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lwazo zonke iindidi esijongana nazo Nutridiet:
Ungaphoswa ziindaba zamva nje esizipapashile kwibhlog yethu yokutya.
Ngaba uyafuna ukubona iimpapasho zethu zamva nje zokutya?
Ungaphoswa ngamanqaku akutshanje kwibhlog yethu yokutya